Tamin'ny 3 jolay 2019, kaontenera 40 metatra telo no nalefa soa aman-tsara avy tao amin'ny foiben'ny vondrona kaiquan any Shanghai ho any ho chi minh port, Vietnam, nanamarika ny zava-bita lehibe iray lehibe teo amin'ny tsena ampitan'ny vondrona kaiquan, orinasa lehibe misahana ny indostrian'ny paompin-drano .
Raha ny drafitra stratejikan'ny vondrona sy ny fanahin'ny torolalan'ny filoha Lin dia hampihatra ny rafitra fiaraha-miasa ankinina amin'ny departemantan'ny raharaham-bahiny amin'ny taona 2019. Ao anatin'ny volana vitsivitsy dia misy mpiara-miombon'antoka vahiny matanjaka nanao sonia fifanarahana tamin'ny vondrona kaiquan. Vao tsy ela akory izay, agents sy orinasa kaiquan matanjaka maromaro no nanao sonia baiko lehibe. Tamin'ny alàlan'ny ezaky ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny departemantan'ny asa any ivelany, dia nahavokatra be ihany isika tamin'ny fahavaratra mafana!
Ny haben'ny famantarana ny varotra jeneraly Vietnam atsimo dia lehibe kokoa, ny totalin'ny tranga 626, ao anatin'izany ny paompy vy tsy misy fantsona, paompy maloto ao anaty rano ary paompy centrifugal dingana tokana, ireo vokatra filaharana misy famaritana, fotoana fandefasana fohy, ary ireo toetoetran'ny takiana avo lenta, mba hamita ity andiana baiko ity, miaraka amina kalitao tsara ao amin'ny vondron'orinasa sy sampana enina, orinasa sy orinasa hefei any amin'ny faritanin'i zhejiang miaraka amin'ny fanohanan'ny mpitondra sy ny mpiara-miasa, ny sampana rehetra hivoaka, handamina tsara ny famokarana, indrindra ny ny mpiara-miasa amin'ny laharam-pahamehana dia mandray andraikitra amin'ny asa mihoatra ny ora, manodina am-pitandremana sy mivory, manisy lanjany lehibe ny rohy fitiliana ny vokatra sy ny famonosana, aorian'ny vondron'orinasa miara-miasa akaiky amin'ny sampana tsirairay, ny fahavitan'ny farany nahavitana ireo andiana baiko ireo, dia tena derain'ny mpanjifa any Vietnam.
Ny fandefasana an'io andiana baiko io dia fanombohana tsara ho an'ny fizarana orinasa any ivelany kaiquan amin'ny fampandrosoana ireo masoivoho manan-danja any ivelany. Kaiquan dia hitadidy ny iraka ampanaovina azy ary hiezaka ny hamorona tontolo malalaka kokoa amin'ny fampandrosoana ny tsenan'ny paompy any ivelany.